Shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe oo dhawaan dib loo furi doono – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe oo dhawaan dib loo furi doono
Wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe ayaa waxay sheegayaan in maanta ay halkaasi ka socoto qaban-qabaadii ugu danbeysay oo lagu doonayo in dib loo furo shirka maamul u sameynta labada gobol Hiiraan iyo Sh/dhexe, kaas oo muddo sanad ah soo jiitameysay.
Kulan dhawaan dhexmaray saraakiisha ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Jowhar iyo gudoomiyaha gobolka Sh/dhexe Cali Guudlawe ayaa waxaa looga hadlay sidii loo sugi lahaa ammaanka shirka maamulka loogu sameynayo gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe, kaas oo la filaayo in dhawaan uu magaaladaas dib uga furmo.
Sidoo kale, ergooyin kala duwan oo ka socda gobolka Hiiraan ayaa haatan waxay ku sugan yihiin magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe, waxaana dhinaca kale ergooyinka gobolka Sh/dhexe la filayaa inay iyagana soo gaaraan magaaladaasi, si shirka maamul u sameynta labada gobol uu dib uga furmo halkaas.
Dhinaca kale, shirar beelaha Abgaal iyo Xawaadle oo maalmihii ugu dambeysay uga socday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa looga hadlayay sida labadaas beelood uga heshiin lahaayeen xur-guf dhinaca dhaqanka ah oo dhex taala.
Ilaa iyo haatan lama oga goorta rasmiga ah uu dib u furmi doono shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe, iyadoona dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya iyo IGAD ay doonayaan in labadaasi gobol maamul ay isku raacsan yihiin loo sameeyo kahor inta aanay doorashada soo socota dhicin.